Isitampu seClone kwiFotohop, isetyenziswa njani? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje siza kuthetha Isikhuseli seConer, indlela ekhawulezayo yokongeza okanye yokususa izinto kumfanekiso.
Ngephedi yokulinganisa sinokuphinda siqokelele iinkcukacha ebusweni, ngokunjalo phinda kabini kumntu osendaweni, okanye susa nabanye abaninzi.
Siza kukubonisa indlela yokukopa amatyeli amaninzi okanye ukususa umntu oselunxwemeni.
Siza kuqala ngokuvula umfanekiso oselunxwemeni kwaye ubuncinci umntu apho.
Sikhetha umntu singathanda ukukopa okanye ukucima kwaye sondeza ukuze singene ngakumbi.
Ukuba umfanekiso uphakathi kancinci kuya kwenzeka kuthi xa usondeza kubonakala ngathi yi-pixelated, kodwa oku akufuneki kube yingxaki, kuba xa sigqibile, siya kususa ukusondeza kwaye kuya kujongeka kuhle.
Siqhubeka ukuya thatha isixhobo Isitampu seClone ongasibona kumfanekiso ongentla. Kuya kufuneka siqiniseke ukuba ayisiyiyo buffer yomzekelo okhoyo kuba oko akunakusinceda kwesi sifundo. Ngokubanzi, le siza kuyisebenzisa kwesi sifundo ifunyanwa ngokungagqibekanga.
Ngoku ukuba sinesixhobo esikhethiweyo kwaye sijonge ngokusondeleyo kumntu esiza kumdibanisa, silungisa ubungakanani ibrashi iyilungelelanisa nobungakanani bentloko yomntu, okanye yomlenze okanye ingalo, oku ukukopa okuncinci okanye kungabikho kwanto kwimeko akuyo umntu esiya kuyiphinda.
Senza "ukhetho" lwento esifuna ukuyenza, ubambe iqhosha le Alt kwaye ucofa kube kanye kuphela. Ke sele sikhethile ukuqala ngaphi ukulingisa. Emva koko kufuneka cofa ngesiqhelo apho sifuna ukukopa loo mntu.
Senza ikopi amaxesha ngamaxesha njengoko sifuna, ukuba nje ngaphambili besikhetha oko sifuna ukukopa.
Ke ukushenxisa umntu apho senza i inkqubo efanayo kodwa endaweni yokukhetha umntu, sikhetha icandelo yendalo eya kuhamba endaweni yayo. Kwaye senza yonke into ngokufanayo noko kwakucwangcisiwe ngaphambili.
Ke ushiyeke, ekugqibeleni, umfanekiso unabantu abaninzi abafanayo, kwaye bambalwa okanye abakho abanye abantu kuwo. Siyathemba ukuba esi sifundo siluncedo kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Isikhuseli seConer
Thatha inxaxheba kukhuphiswano lweAdobe apho kuya kufuneka ucelomngeni kwimbono yakho